Kutaaleen Yunaayitid Isteetis hangt tokko sababaa weerara vaayiresii koronaan ugguram kaa’amee ture kaasuuf sochii jalqabnii jiru. Angawoonni eegumsa fayyaa kan federaalaa immoo mallattoon dhibee vaayiresii kanaa dabaluu isaa beeksisan.
Angawoonni eegumsa faayyaa Yunaayitid Isteetis akka jedhanitti qaamni namaa nama hoollachiisuu, mataa dhukkubbii, qoonqoo keessi nama dhukkubuu, waa dhandamuu fi fuunfachuu dadhabuun mallattoo daariqa ykn infection vaayiresii koronaa ta’uu akka dand’a.
Waaltaan ittisa fi to’annoo dhukkubootaa kan US qaamni ho’uun hafuura nama kutuu fi qufaan mallattoo COVID 19 ta’uu beeksisanii turan.
Hoogganoonni Koloraadoo, Missisiippii, Montaanaa fi Teenesii maneen daldalaa hangi tokko hojii har’aa akka banamu eeyamaniiru. Hoogganoonni Joorjaa, Oklahoomaa, Alaaskaa fi South Karolaayina namoonni akka hojiitti akka deebi’an jajjabeessanii jiru.
Hayyoonni eegumsa fayyaa daldalaawwan dafanii banamuu isaa mormuu dhaan akeekkachiisanii jiru.
US keessaa namoonni 980,000 COVID -19n yoo qabman kummi 55 du’aniiru.
Sababaa vaayiresii koronaan hojii dhaabanii kan lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 26.5 ta’uu ministriin dhimma hojjettootaa beeksisee jira.
Prezidaant Doonaald Traamp daldalaawwan xixiqqoo fi hospitaalatoa deggeruuf kan oolu seera doolaara biliyoona 484 raggaasisu Jimaata darbe mallatteessaniiru.